Sh Shariifow: Carab Ciirsi Ha Moodin, Ha Canaanin Mayd
Waxaan dhawaan ka akhriyay bogaga Internetka soomaalida iyo wargaysyo carbeed,dhaleecayn Sh Shariif u soo jeediyay Jaamacada Carabta”inay ka gaabiyeen waajibkoodii ka saarnaa walaalahooda soomaliyeed ee guumaysigu qabsaday, isla markasna garba-duub siyaasadeed ku hayaan dadaalada iyo howlgalada la iskaga cabinayo guumaysiga Xabashida”.Waxa kale oo aan akhriyay bayaan ka soo baxay Jaamacada Carabta oo ay ku beeninayaan eedaynta sheekha.
Hadaba waxaan jeclaystay inaan wax yar ka iftiimiyo xaalada Jaamacada iyo Dawladaha Carabta ee ku kulma daladeeda.
Si aynu fahano,saamaynta iyo mawqifka siyaaseed ee dawladahaas, xiriirka iyo iskaashiga siyasadeed,dhaqaale ee xubnaha jaamacada ka dhexeeya.Go,aan qaadashadooda iyo inay leeyihiin istraatiijiyad siyaaseed oo midaysan isla markaasna ku salaysan aragti iyo mawqif guud oo ka midaysnyiin bah- wadaagta carabtu. Tayada iyo baaxada hiilka ay u fidiyaan hadii dal ama dad carbeed mashaqo ku habsato ama col iyo duulaan shishiyeey waxyeelo u gaysto, Hanaanka siyaasadeed ee gudaha dawladahaas iyo ugu danbayn tusmo taariikheed kooban oo ku saabsan Jamaacada Carabta lafteeda.
Marka aynu guud mar ku falan-qayno waydiimaha kor ku xusan , ayaynu fahmi karma kaalinta iyo waxa ka suurtooba ama laga fili karo jaamacada iyo dawladaha carabta ee ku aadan halganka aynu kula jirno cadawga Amxaarada.
Ugu danbayn waxaan ka cudur daaranayaa in aanan arimaha kor ku xusan sida ay isugu xigaan ugu wada jawaabi doonin , balse jawaab guud mar ah ka dhiibi doono, oo inuu sahasha fahamka muuqaaalka guud ee arinta aynu lafa gurayno.
AKhristow ugu horayn dawladaha carabta ee aad maanta taqaana ee dhawr iyo labaatanka calan lihi, waa gacan ku rimis guumaysiga dawladaha reer yurub sameeyeen wixii ka danbeeyay dagaalkii koobaad eea aduunka .
Ka dib markii la jabiyay Imbaradooroyadii Cismaaniyada, oo ahayd shan mudo shan qarni ah awooda iyo dalada siyaaseed ee kulmisa dadyawga Muslinka intooda badan, isla markaasna hortaagnayd mudadaas damacii iyo duulankii reer Yurub.
Waxa waliba nasiib daro ah in dadyaw carbeed ka qayb qaateen duulaanka huwanta reer galbeedku ka takhalustay Boqortooyadii Cusmaaniyada.
Waxa la sameeyay dawladaha maanta aad taqaan , si loo qaybiyo isku duubnida, iskaashiga iyo midnimada dadyawga Muslinka ah ee bariga dhexe iyo Afrikada waqooyi ku nool.
Sanadkii 1945 waxa qorshe uu Ingriisku horseed ka ahaa lagu dhisay Jaamacada Carabta, si loogula dagaalamo dadaaladii soo noolaynta midwgii islaamka iyo dib u yagleelka Khilaafa Islaami ah . Dareenka iyo guuxa noocaas oo dadyawga muslinka aad ugu xooganaa xiligaas. Sadex sanood ka dibna waxa lagu dhawaaqay dhalashada dawlada Yuhuuda 1948kii.
Dhamaan dawladaha iyo boqortooyooyinkii ururkaas sameeyay waxay ahaayeen ku ku wareega falaga dawladaha guumaysiga .
Hadaba maadama aynu tusmo gaaban ka bixinay dhalashadii Jaamacada Carabta, waxaynu u gonda-dagaynaa tilaamaanta astaamaha ay ka midaysanyihiin Dawladaha Carbeed ee maanta jira iyo hab-dhaqankooda siyaasadeed.
Mawqika iyo Aragtida Siyaasada:
Ugu horayn waxa ku kulma dalada Jaamacada Carabta ,maamulo kala aragti,hanaan iyo dano duwan . Jamhuuriyado,Boqortooyooyin,Imaarado, Saldanado ,iyo Jamhuuriyado u dalacay boqortooyo.
Dhanka fikirka ,inkastoo aanay saamayn badan ku lahayn ,hadana Todobaatanadii iyo lixdanadii qarnigii hore ,waxay u qaybsanaan jireen dalal hor-u socod isku tilmaama iyo kuwo dib socod ama qunyar socod lagu xanto( waar ma diinbaa) oo u xaglin jiray dhinaca dawladaha galbeedka,dhinac u socod iyo qaar aan meelba u socon.
Hadase hal muuqaal iyo mawqif ayay wada yeesheen.Oo waxa ay ku wada daba fayleen Mareekanka ,marka laga reebo wadamo faro ku tiris ah ,oo aan wali jilbaha dhulka loo dhigin. Sidaa awgeed, ma laha mawqif iyo falsafad siyaasadeed ,oo joogta ah ama loogu soo hagagaagi karo.
Mawqifka kali ah ee la hubo inay taageerayaan ,waa midka Washington looga yeedhiyo,ama tartanka u kala dheeraynta kasbashada raali galinta Washington. Mawqifka kale ee ay ka midaysanyiin ,waa xumada xukun jacaylka.
Qaabka Go,aan Qaadashada:
Maadaama aanay jirin fikir iyo aragti siyaasadeed , oo ka midaysanyiin dalalka carabtu, ma laha go,an iyo mawqif midaysan oo wadar ahaan ugu camal falaan. Sidaas daraadeed waxa ay leeyihiin labaatan mawqif oo is garab yaacaya ama is burinaya.
Waliba go,aamada muhiimka ,waxa iska leh oo aan cidi talo iyo tusaalaba ku biirin karin, madaxda sare ee dal kasta. Iyaga oo aan ku salayn ,aqoon iyo diraasad lagu lafo guro.
Intaas wax dheer ma jiraan baarlamaano iyo gudi-hoosaadyo madax-banaan oo talada soo bisleeya ama rogroga.
Sidaa daraadeed talada dalalku waxay u faruur xirantahay kooxaha ama qoysaska xukuma dal kasta. Iyaga ayaa jaan-gooya ,inta badana taladooda waxa ay ku qotontaa hal ujeedo oo kali ah , waa u cimri dheeraynta iyo ilaalinta xukunkooda.
Waxaas madaxda umadahu ku hamiyayaan ama ku hawlanyiin hor-marinta dalalkooda, madaxda Carbeed waxay talo kaga gudhay , la tashiga faaliyayaal u sheega khataraha ku soo fool leh kursiga!!!!!!!.
Bal akhristow adiguba qiyaas,labaatan kali talis ,oo leh labaatan ujeedo oo kala gadisan. Waxaa la odhan karaa waa labaatan hogaamiye beelood ama kooxeed oo haysta aqoonsi,maamuus khasab ah,awood iyo lacag .
Dhanka kale waxa madaxda carabta kursiga ka kaxeeya oo kali ah,geeri ama xanuun sariirta looga kici waayo. Mararka qaarna waxa dhacda iyaga oo asaasaqay inay hadana talada hayaan ,sida Boorqiibihii Tunisiya!!!
Hadaynu u soo noqono Jaamacada Carabta,waxa xeer hoosaadkeeda go,aan qaadashadu ku salaysanyahay, in aqlabiyad buuxda lagu ansixiyo go,aamada muhiimka ah. Taas oo calaacal timo ka soo baxeen ka dhigaysa gaarista qaraar lagu midaysanyahay oo meelmar noqda, maadaama aynu ognahay inaanay waxba ku heshiis ahayn(Carabi waxay ku ,heshiisay inaay heshiin) xubnaheedu. Sidaa daraadeed xaalkeedu waa I jiid aan ku jiidee iyo shinbirayahaw heesa.
Xiriirka Dhaqaalaha iyo Siyaasada:
Hadaynu ku horayno dhinaca dhaqalaha , waa 6% xidhiidhka ganacsi ee ka dhaxeeya dawladaha carabta . dhanka kale 94% waxay la wadaagaan dalal shisheeye sida yurubta galbeed maraykanka,jabaan ,shiinaha ,hindiya iyo kuwo kale.
Ma jiraan mashaariic dhaqaale oo wax ku ool ah ,oo ay wadaagaan dalalka carabtu.
Sanaddkii 1956 waxay dalalka jaamacada carabtu qalinkaku duugeen heshiiskii iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka carabta . Waxay ku heshiiyeen, in heshiiskaasi u noqdo gogol-dhig , Suuq Wayne dalalka carbeed wadaagaan oo wax-soo –saarkooda isku waydaarsadaan, kuna kobciyaan warshadooda yaryar ee soo koraya. Ilaa maanta wax ka qabsoomay majiraan riyadaas .
Dhanka kale isla sanadkii 1956, waxa qalinka lagu duugay heshiiskii Mastrekhti,ee dalalka yurubta galbeed ku saxeexeen magaalada Rome ee dalka talyaaniga . Heshiiskaas oo saldhig u ahaa, iskaashiga dhaqaale ee dawladaha yurubta galbeed, ee dagaal waynihii labaad ka soo doogay.
Midhihii heshiiskaasi waa ururka midwga yurub , ee aynu ogsoonay haybada iyo saamaynta uu ku leeyahay siyaasada dunida.
Bal akhristow, adiguba ka fikir farqiga u dhexeeya labadaas heshiis iyo labaad natiijo ee ka kala dhashay.
Intaas waxa dheer dalaka carabtu , waxay in ka yar 1% ku bixiyaan cilmi baadhista iyo kobcinta tiknoolijiyada . Intaas oo kali ma ahee , lacagta ka soo gasha shidaalka iyo alaabada ay dhoofiyaan ,kuma maal-galiyaan xoojinta dhisma –hoosaadkooda dhaqaale,ee waxay ku maamulaan hantidooda takri-fal qorshe xumo.
Waxay ku iibsadaan lacagtooda adag alaabo diyaar ah ,oo inta badan laga maarmi karo ama la samayn karo dhigaalkeeda oo wadani ah.
Ka dar oo dib dhal, waxay in ka badan 50% dakhligooda ku bixiyaan hub iibsi, hubkaas oo aan sakaarana lagu dilin, maalin kali ahna aan guul lagu faano lagu soo hoynin(wali miyaa maqasheen ciidan carbeed oo guul soo hooyay).
Iibsiga hubkaas oo inta badan lagu raali galiyo dawladaha reer galbeedka, dhaqaalahoodana lagu dar-dar galiyo(shaqo abuuris).
Waxa u danbeeyay, oo wali raadkiisi qoyanyhay,heshiis maalin dhawayd dalka Sucuudigu kaga iibsanyo wadanka Ingiriiska hub qiimihiisu dhanyahay 60 bilyan(lix dan kun oo Malyuun$).
Heshiiska oo dhacay iyada oo wali ay taaganyay waji-gabaxii ka dhasahay heshiiskii uu hubka kaga iibsaday Sucuudigu isla dalkaasi ingiriiska , ee la magac-baxay AL-YAMAMA,qiimihiisana maanka fiyoobi diidayo.
Heshiiskaas waxa dilaal bilyano qaatay ka ahaa,Bandar Bin Suldaan, oo ah wiil uu dhalay ninka leh dhaxalka boqortooyada Sucuudiga ,horena u ahaan jiray dan-jiraha sucuudiga u fadhiya dalka mareekanka.
Hadaba akhristow, iskaashiga iyo xidhiidhka carbeed, ee habsami u dhaqan-galaa,waa kulan sanadeedka wasiirada arimaha gudaha ee dawladaha carabta .
Shirkaas oo ay kaga arinsadaan sidii talisyadooda ilka dhacsaday,looga ilaalin lahaa dabaylaha isbadal-doonka a , iyo tabaha ugu casrisan ee cabudhinta dadwaynahooda.
Talo kale, oo ay hagar-baxaan dawladaha carbeed ma jirto. Sidaad daraadeed wakhti iskaga lumin mayno ka hadalka xidhiidhka siyaasadeedee dawladdaha carabta ,oo aan dhaafsiisnayn,safaarado la is-waydaarsado oo hadana dib loo kala qaato, marka laba madaxwayne ku murmaan shir-madaxeedka jaamacada carabta .ama qalabka war-baahinta la isu mariyo fariimo cay ah.
Hiilka iyo garab istaaga.
Dhinaca hiilka iyo isu gurmashada dawladaha Carbeed,malaha sawirka ugu fiican waxa ka bixinaysa tixdan gabayaaga soomaaliyeed tiriyay:
Baadida ninbaa kula daydayi daalna kaa badan
Oon doonahayn inaadheshaa daayin abidkaa
Dadkuna moodi duul walaalo ah oo aan wax u dahsoonahayn
Dalo ma laha aakhiro hadii loo kitaab dayo
Waxaan intaas raacin lahaa ,qofkii doonaya inuu ogaado hiilka iyo taageerada maamulada carbeed u fidiyaan walaalahooda kale iyo qadiyadahoodaba , ha eego Falastiin .
Waxa dhibaato aad la wada socotaan ee haysta dadka reer falstiin . Ma jirto dal Carbeed oo si run ah ugu damqada ama hiil muuqda oo waxtar leh u fidiya dadkaas!!!
Intaas oo kali ah maahee, qaar badan oo ka mid dalalka Carbeed waxay ku hayaan cuna-qabatayn siyaasadeed iyo dhaqaaleba, halgamayaasha reer falastiin.
Waxaan dhagahayga ku maqlay Ninka la yiraa Shemon prez, oo haatan ah madax-waynaha dawlada yuhuuda.
oo u mahad-celinaya dalka Masar, sida fiican ee ay u hor istaagaan dagaal-yahanada reer falstiin, oo hub si qarsoodi ah uga soo gudbin jiray xadka Falastiin iyo masar wadaagaan .
Hubkaas oo ay u adeegsadaan hawl-galada iska caabinta. Ee ay kala horjeedaan ciidamada Yuhuuda!!!.
Mar hadii dawladii carabta ugu waynayd ay sidaas ula dhaqmayso reer Falastiin oo qadiyadooda lagu tilaamaamo “ udub-dhexaadka qadiyadaha carbeed” maxaa hadhay?
Tusaale kale oo yaab leh, xiligii cuna-qabataynta reer galbeedku ee magaca dunida huwani saarnayd dalka Liibiya.
Ayaa madax-waynayaasha dawladaha afrikada madaw, oo uu hor-kacayo Nelson Mandela ku gacan sayrayn cuna-qabatayntaas .
Sidaas awgeed waxay ku iman jireen wadanka Liibiya diyaarado,si ay u buriyaan cuna –qabatayntaas.
Waxa ka mid ragii duulimaadyadaas hiilka ah ku tagay Liibiya ,madax-waynaha dalka Nayjar. Oo lagu xaman jiray inuu wax diyaarado ah ka naxo mid, kuwa qumaataiga u kaca ah. oo waliba bukan socod ah. Ayaa isla soo biimeeyay diyaaradiisii kalida ahayd, soona caga dhigtay liibiya.
Hadaba xiliga madax-waynayaasha Afrikada madoobi dadaaladaas wadeen, dhanka carabta ma jirin madax-wayne kali ah oo liibiya duulimaad xaga cirka ah ku yimid.
Balse madax-wayne Mubaaraga Masar, oo booqasho liibiya ugu kicitimay waxa uu soo galay socdal xaga bariga ah.
Isaga oo soo jeexay saxaraha dheer, ee u dhaxeeya Liibiya iyo Masar. Taas oo ugu dan lahaa dhaqan-galinta xayiraada duulimaadyada ee Liibaya saarnayd.
Waliba akhristow aan ka qosliyee, markii doorashada baarlmaanka Falastiin, uu ururka Xamaas ku guulaystay. Dawlada Masaaridu, waxay arintaas ka soo saartay bayaan ay ku sheegtay , in doorashad Xamaas tahay khatar ku soo fool leh qaranimada dalka Masaarida.
Ma ogtahay, 200 ee Madax ee Nukliyeerka dalka Yuhuuda haysto, uma argagto Masar halis amaankeeda iyo qaranimdeeda walaac galinaysa!!!!!!!!!
Waliba akhristow bal, markana iga hoo amakaag iyo umuur kale oo yaab leh.Ma ogtahay duulaankii Mareekanku Dalka Ciraaq ku qabsaday , waxa uu weerarka kaga qaaday 10 saldhig ciidan, 9 sagaal saldhig waxay ku yaaleen dalal carbeed !!!.
Waliba waxa intaas dheeraa xogaha sir-doonka, shidaalka iyo saadka ay la daba taag-naayeen ciidamada mareekanka ( ha moodin Maxamed dheere oo kali ahi, inuu cadawga caano iyo biyo daba- qaado ,waa la badanyahay).
Sidoo kale ma ogtahay saldhigii weerarkaas laga hogaaminayay, ma ahayn Washington,ama xarunta gaashaandhiga mareekanka.
Wuxu ahaa saldhiga Siiliya ee dalka Qatar.
Waa taas siyaasada,mawqifka iyo hiilka dawldaha Carabtu. Waa xaqiiqo qadhaadh oo maanku arga-axayo,laakiin riyo maaha iyo dhalanteed . waa xaqiiqadii iyo runtii oo biyo kuma dhibcaan ah.
Hanaanka iyo Qaab-hismeedka Maamulada(xukuumadaha).
Dhamaan wadamada Jaamacada Carabta ,marka laga reebo dalka Muritaaniya, oo dhawaan mucjiso ka dhacday,ka dib markii Janan af-gambi ku qabsaday ,xilkii iskaga dagay ,doorasho xor ahna qaban-qaabiyay. Ka dibna xilka ku wareejiyay, madaxwayne doorasho ku yimid.
Inta kale mada-waynayaasha Carabta, kursiga way ku daxalaysteen siday ugu fadhiyeen.
Waxa arin la yaab leh ah,dhamaan qaaradaha iyo gobolada aduunka waxa ka jira maamulo iyo dawlado doorasho iyo xaashi tiris xilka ku yimid , inta ay doonaanba ha ahaadeene.
Balse marka bariga dhexe la soo gaadho iyo dalalka carabta,Waxaad moodaa in hanaanka dimoqoraadiyada dhakhtar ka mamnuucay.
Akhrisrow xata markii midawga soofiyeeti kala yaacay , ee dabylaha isbadalku saaqeen bariga yurub. Dabayshaasi may soo gaarin mana saamayn Bariga dhexe!
Waxaad moodaa inuu jiro ajnade iyo qorshe qarsoon oo meel shishe laga dajiyay,oo dawladaha carabta loogu qoray maamulo kali talis oo ku fashilmay dhan kasta oo nolosha ah. Hadan soo taagan,cajab iyo amuur sow maaha !.
Dalalka carabta sharcigu, waa rabitaanka boqorka ama madax-waynaha dalkaas ,danta qaranku waa tiisa iyo mida xulufadiisa ,cadawga dalku waa cid kasta oo isaga iyo maamulkiisa dhaleecaysa .
Cabudhinta iyo jidh-dilku waa qalabka lagu aamusiiyo qof kasta oo dood ka keena sida dalka iyo dadka loo hogaaminayo.
Garasho ,karti, xikmad intuba waxay ku soo urureen oo la aqoonsaday maxawaynaha ama boqorka(Aabihii garashada Siyaad Bare oo kali ah maah).Dhaqaalaha iyo awooda oo dhani waxay ku jiraan gacmo kooban, oo aan lagu hungurayn karin. Hadii laysku dayona waa dil iyo dacas. Waxaas oo isla yaab isla diid ah ayaa ka jira wadamada carabta. Hadana dawladahaas qoraxdu kama dhacdo inta ay fulinayaan amarada iyo talooyinka meelo kale looga yeedhiyo.
Dadka Iyo Xukuumadaha.
Maadaama xaalkii xukuumadaha Carbeed sidaas yahay, dad-waynahooduna mala mid baa?waa arin lays waydiin karo.
Sidaas daraadeed,waxa laga maarmaan in aan loo fahmin dhaliisha madaxda carbeed , mid dawlad iyo dadwaynaba saamaysa oo ay eeda wada leeyihiin.
Oo aan laysla tuurin madadxa iyo shacabka (kab iyo xaarkeed isu tuur).
Maya,maya, xaalku sidaas maaha.Dadwaynaha carbeed waxay dhibaato qabaan ilaahay ayuunbaa qiyaasi kara. Waa dhibanayaan aan codi iyo qareen midna lahayn.
Hadaba,sidii caadada inoo ahayd , hadaynu Soomaali nahay, ee wax kasta duuduub loo jeclaan jiray ama loo jaman jiray yaan la yeelin.
Ee ha loo duceeyo in ilaahay kali talisyada ma naxaanka ah ka kaxeeyo.
Waa in la ogsoonaadaa in dadyawga carbeed,laga hor istaagay inay xataa ka banaan baxaan duulaamkii ciraaq lagu qaadayay.
Xili daafaha aduunka oo dhan laga muda-aaraadayay, oo banaan baxyadii ugu waynaaa ka dhacayeen yurub iyo mareekanka laftiisa. Dabcan way leeyihiin eeda ka gilgilasho la,aanta xukuumadahooda ka talisayada ah.
Sheekh Shariif iyo Halganka.
Hadaan u soo noqdo arartaas ila dheeraatay kadib, ujeedada maqaalka waxaan leeyahay sheekh shariif,wuu ku mahadsanyay dareenkaas xaqa ah ee uu muujiyay,iyo sida uu farta ugu fiiqay dalal aynu dareen, diin iyo ilbaxnimoba wadaagno, oo cadaw inagu daawanaya caasimadeenii qabsaday.
Balse waxaan sheekha xasuusinayaa gabay nin carbeed oo aftahan ahaa tiriyay( waxaan filayaa waa Abul-calaa AL Macari) oo micnihiisu afsoomaali ahaan sidan yahay:
Hadii aad u qayshato qof nool ayaa dhawaaqa cesha
Hadiise aad mayd la hadasho, ilayn kuuma jaawabo.
Waxaa kale oo raaciniya hadalkaas gabayaaga ,tix kale oo gabyaa soomaaliyeed tiriyay .
Dundumooyinkoo la hadlaa Damac ma yeeshaan.
Sidaa awgeed sheekh shariifow, madaxda carbeed ee maanta joogaa maaha kuwo looga fadhiyo gacal dhaw mid dheer inay,gutaan xilkii umadahooda ka saarnaa.
Gurmad iyo taageerana hadalkoodaba dhaaf. Sawkii madxawayna Mubaaraka Masar markii uu Qaahira kula kulmay wasiirka arimaha dibada Ethiopia Azyum Misfin lahaa maaha “waanu ugu garaabaynaa Itoobiya talaabada ay ku kacday ee ah qabshada Muqdisho” waar ilayn ceeb looma dhinto!.
Jaamacada carabtuna waa kadar oo dibi,waa urur maamuus,mawqif iyo karti intaba ka aradan.
Murtideeduna ma dhaafsna shaxaadka mushaharka shaqaalaheeda iyo safarada xil-wadeenadeeda,kolba madal ka hantaataca,ee waxqabdkooda ugu wayni yahay dhan-baalada dhaadheer, ee been- abuurka ah,ee ka hadla horumarka iskuu duubnida iyo barwaaqo-sooranka dalalka carabta.
Sidaas awgeed waxba caanaan lagaga dheefi maayo.Waxay la mid tahay inagoo weel madhan dhaaminayna.
Waxan soo jeedin lahaa, hadalada sharafta iyo miisaanka leh ee sheekh shariif ,inaan lagu khasaarin meeshaas iyo nimankaas hungada ah.
Waxaan ku soo koobi lahaa qoraalkan ila taraaray,ee malaha xikmada dhinac maray.Horta ugu maynaan horayn umad cadaw qabsado,oo casimadeeda dhex mushaaxo.
Baariisba maanta waa xor, inkastoo Hitler qabsaday. Taariikhdu imtixaan adag ayay inoo dirtay, ha lisku tashado .Waxa kali ah ee lagu tala-galaana,ha noqdaan ugu horayn gallada ilaahay,marka xiga cududa,talada,dhaqaalaha dadwaynaha soomaaliyeed intooda dareenka iyo damiirka fiicani wali ku sii hadhay.
Iyaga ayaa ah horseedka rajada iyo guusha.Waxa maanta la joogaa xaaladii abwaanka soomaaliyeed ka lahaa:
Dhaqashiyo marbay kaa yihiin dheregtu xaaraan
Dhasaaday sugtaa xaajadaad dhawrataa abid.
Jiritaankeena qoomiyadeed, waxa uu maanta ku jiraa halis aan hore inoo soo marin. Ciroole iyo caruurba, tani maanta maaha mid loo kala hadhi karo.
Waa in gacmaha lays qabsadaa garabkana la isa saaraa.
Waa in la beeniyaa hunguriga nacasnimada ah ee Xabashida,ee doonaya inay dad iyo qaran wali ifka ku nool dalkoodii dhaxlaan . Yaynaan noqonin falastiin cusub.Ee walaalayal soomaaliyeey,gobanimo dagaalama is-dhiib waa gunimo wayne.
Aljazeera oo Waraysi la yeelatay SH. Xasan Turki. (Daawo Video-ga hoose ama ka daawo halkan...)
DAAWO: VIDEO ay baahisey Aljazeera oo ku saabsan Soomaaliya
Nin Soomaali ah oo Talaadadii lagu xiray Maraykanka "ma aha Argaggaxiso ee waxaa loo xiray arrin la xiriirta Daroogo..."
Cadde Muuse oo Shaaca ka qaaday in ku "daalay" Madaxweynanimada
"waa waqtigii aan nasan lahaa.. anigu waan daaley.." Sidaas waxaa yiri Madaxweyanaha DGPL oo u waramayey idaacada Codka Maraykanka, waxa kale oo uu ka hadalay Batroolka..